Fat: Tsy mety voky | mandimby maharo
Fat: Tsy mety voky
Posted on 15 May 2013 by Mandimby Maharo
Taorian’ilay fehezan-teny “Mbola ho dinihina ny lalana (momba ny fialako)” nataon’ny Fat nandritra ny fanamarihana ny faha-41 taonan’ny 13 May, dia notanterahany tokoa izany. Namorona didy hitsivolana tokoa ny tao Ambohitsirohitra afahany mitana io andraikitra io raha toa ka misy ny fihemoran’ny datim-pifidianana. Ankoatr’izay dia voafaritr’io lalana io koa fa ho voatana avokoa ny zo sy tombotsoany mandapahatonga izay Filoham-pirenen’ny Repoblika vaovao mahavita fianianana.
NAfana tokoa ny adihevitra teo anivon’ny filan-kevitry ny Governemanta nahakasika io lalana io. TSy nekena nefa izany na dia niady mafy aza ny MInisitry ny Fitsarana sy ny Minisitry ny Atitany ny amin’ny handanina izany.
Indreto ary omenay ho hita eto ny dika mitovy amin’izany lalana Irin’ny Fat ho tanterahina izany.
Ny fanontanina mipetraka dia ny hoe: Mbola tsy ampy ity filoha tsy lany tamin’ny fifidianana ity ihany ve izay 4 taona nipetrahany tao an-dapa izay? SA inona no arovany mafy ao, ankoatr’ireo tombotsoa voalaza ao amin’ity lalana ity, ka avitany mamorona ny tsy misy mihintsy?
One thought on “Fat: Tsy mety voky”
15 May 2013 at 2008 17
Un assoifé de pouvoir! Vraiment du Hena An-tanan-Tsaka HAT